TPLF Oo Shuruudo Hordhigtay Xabad Joojinta Itoobiya Ay Codsatay – Goobjoog News
TPLF Oo Shuruudo Hordhigtay Xabad Joojinta Itoobiya Ay Codsatay
Waxaa sii kordhaya cabsida iyo xiisadda colaadeed ee ka jirta gobalka dhaca waqooyiga Tigrayga ee dalka Itoobiya .
Jabhadda iyo ciidamadeeda ayaa shuruuda ku xirtay in ay aqbasho xabad joojin Abiy uu ka codsaday kadib markii ay la wareegen in magaalada Mak’elle.
Shuruudaha ay jabadda ku xirtay ayaa waxaa ka mid ah In Maleeshiyaadka Amxaarada iyo ciidamada Eriteriya laga saaro gobolka Tigray laguna celiyo goobihii ay joogeen markii hore.
Ciidamada ayaa sidoo kale aqbalidda xabad joojinta waxa ay ku xireen si ay u aqbalaan In Qaramada Midoobay ay sameyso hay’ad madax banaan oo baadha dambiyada ka dhacay gobolka tigrey, lana diyaariyo habab ku haboon oo dambiilayaasha lagu horkeeno maxkamadda dambiyada caalamiga.
Hogaanka jabhadda TPLF ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in si Bilaa shuruud waa inaa gargaar bani’aadamnimo la gaadhsiiyo shacabka Tigray.
TDF ciidamada difaaca Tigrayga ayaa sidoo kale waxa ay ugu baaqeen xukuumadda si ay u aqbalaan xabad joojin gobalka ka dhaqan gasha in loo baahan yahay Shacabka Tigray inay si buuxda uhelaan dhamaan adeegyada aas-aasiga ah sida korontada, isgaadhsiinta, Bangiyada, Duulimaadyada, waxbarashada, daryeelka caafimaadka, Gaadiidka, iyo ganacsiga.
TPLF ayaa sidoo kale sheegtay in lagama maarmaan ay tahay in in ay si toos in loogu ogolaado gobolka Tigray howlgalada duulimaadyada caalamiga ah.
Jabhadda ayaa sidoo kale sheegtay in iyada oo aan wax shuruud ah lagu xidhin la ogolaado Dawladdii Tigreega ahayd ee si dimuqraadi ah loo soo doortay ee xisbiga TPLF gadhwadeenka ka ahaa, iyadoo leh dhamaan awoodaheeda dastuuriga ah iyo masuuliyadeeda, inay dib u bilowdo shaqadeedii caadiga ahayd.
Tigrayga ayaa waxa ay ku amreen dowladda in laga Noqdaa dhamaan Go’aamadii laga qaatay Gobalka Tigray Lana sii daayo Dhammaan siyaasinta u xidhan TPLF iyo Saraakisha Milatariga Itoobiga ee loo xidhay inay xidhiidh la leeyahiin Xukuumadda Tigray.
Ugu dambeyn Jabhadda TPLF ayaa ku baaqday in la sameeyo hay’ad caalami ah oo madax-bannaan oo ka shaqaysa hirgelinta shuruudahan horudhaca ah ee xabad-joojinta iyadon waliba wax gorgortan ah laga galin karin.
Dab Sababay Dhimashada Laba Carruur Ah Oo Ka Kacay Xaafad Ku Taalla Hargeysa
Dad Ku Dhintay Iska Hor Imaad Ka Dhacay Dalka Myanmar
Guddoonka Guddiga Doorashada Koonfur galbeed Oo La Doortay